PHP programing Language အကြောင်း PHP ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြော ပြပေးပါ။
Dynamic web page မှာတော့ မိမိတင်ထားတဲ့ သတင်းအချက် အလက်တွေပြောင်းလဲရုံနဲ့ ပဲ မိမိတင်ထားတဲ့ website ပေါ်က သတင်းအချက်အလက်တွေကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲ နိုင်မှာပါ။ Sever Side Programming ဆိုတာဘာကို ရည်ညွှန်းတာလဲ။
This entry was posted in Programming. Bookmark the permalink.	← >Hide Blog HeaderTitle In Blogspot